Totemisation - Tily eto Madagasikara
Ny fanomezana solon’anarana (totemisation) araka ny tantara
Teo amin’ireo amerindiens, foko zanatany tany Amerika, rehefa tonga teo amin’ny atao hoe « taonan’ny mpiady» ny zatovolahy iray dia alefa hitady volom-boromahery ka tsy mahazo miverina ao an-tanànany raha tsy mitondra. Izany no nentiny hanaporofoana fa afaka hiaro ny foko misy azy izy. Tany amin’ny foko « zoulou » tany Afrika indray dia tahaka […]
Ny fanomezana anarana (totémisation) araka ny Soratra Masina
Ny totémisation dia fomba fanomezana anarana ho an’olona iray ao amin’ny fiaraha-monina iray. Raha ao amin’ny Soratra Masina dia i Eva no olombelona nahazo anarana voalohany ka i Adama no nanomeanarana azy. « Aina » no hevitr’izany. Ny anarana dia miforona manomboka eo amin’ny fiandohan’ny aina ary ny fahaterahana dia milaza aina vaovao sy anarana […]